बीबीएल : होबार्टमा आवद्ध को-कोले खेलेका छन् आईपीएल? | सुदुरपश्चिम खबर
१० औँ सिजनको बीबीएल आउँदो १० डिसेम्बरदेखि अष्ट्रेलियामा सुरु हुँदैछ । यो पटक पनि नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले बीबीएल खेल्दैछन् । उनले आसन्न सिजनमा होबार्ट हरिकेन्सबाट बीबीएल खेल्न लागेका हुन् ।
सन्दीप तेस्रो पटक बीबीएलमा सहभागिता जनाउन लागेका हुन् । यसअघि उनले दुई सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए । सन्दीपले हालसम्म बीबीएलमा २० इनिङ्समा २६ विकेट लिएका छन् ।
आसन्न सिजनमा सन्दीप सम्मिलित होबार्टले पहिलो म्याच सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध खेल्ने छ । यी दुई टिमबीचको खेल १० डिसेम्बरमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो २ बजेदेखि होबार्टमा सुरु हुनेछ ।
लिग चरणमा सबै टिमले १४/१४ म्याच खेल्ने छन् । दोस्रो म्याच होबार्टले १३ डिसेम्बरमा एडिलेट स्टाइकर्सविरुद्ध खेल्ने छ ।
त्यस्तै, होबार्टका बाँकी म्याच १५, १९, २७, ३० डिसेम्बर, ५, ७, १२, १८, २२, २४ र २६ जनवरीमा छन् ।
१० औँ संस्करणमा पनि होबार्टको कप्तानी अष्ट्रेलियान टिमका अनुभवी विकेटकीपर/ब्याट्सम्यान म्याथ्यू वेडले गर्नेछन् । होबार्टमा युवादेखि अनुभवी खेलाडीको मिश्रण छ । यो टिममा सन्दीपसहित सात जना आईपीएल खेलिसकेका खेलाडी छन् ।
आईपीएल खेलिसकेका होबार्टका ८ खेलाडी :
म्याथ्यू वेड : टिम कप्तान वेड आईपीएल खेलिसकेका अनुभवी खेलाडी हुन् । उनले दिल्ली डेयरडेविल्सबाट आईपीएलमा सहभाविगता जनाइसहेका छन् ।
३२ वर्षीय वेडले अष्ट्रेलियाका लागि ९४ वानडे, ३२ टेष्ट र ३० टी-२० म्याच खेलिसकेका छन् । उनले टेष्टमा चार र वानडेमा एक शतक बनाएका छन् ।
जेम्स फल्कनर : होबार्टका अर्का महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् जेम्स फल्कनर । उनले राजस्थान रोयल्स र किंग्स इलावेन पञ्जावबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् ।
तीव्र गतिका बलिङ गर्ने ३० वर्षीय फल्कनर राम्रो ब्याटिङ पनि गर्न सक्छन् । उनले अष्ट्रेलियाका लागि ६१ वानडे, २४ टी-२० र एक टेष्ट म्याच खेलेका छन् ।
फल्कनरले वानडेमा एक शतकसमेत बनाइसकेका छन् । साथै उनले अष्ट्रेलियाका लागि ६९ वानडेमा ९६, २६ टी-२० मा ३६ र एक टेष्टमा ६ विकेट लिएका छन् । फल्कनरले २०१७ यता अष्ट्रेलियाको टिमबाट खेल्ने मौका पाएका छैनन् ।
टिम पेन : यी खेलाडी टिमका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडीमध्ये एक हुन् । अष्ट्रेलियाको टेष्ट टिमका कप्तानसमेत रहेका उनले पुणे वारियर्सबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् ।
पेनले अष्ट्रेलियाका लागि हालसम्म ३५ वानडे, ३१ टेष्ट र १२ टी-२० खेलेका छन् । ३५ वर्षीय उनी विकेटकीपर/ब्याट्सम्यान हुन् ।
सन्दीप लामिछाने : नेपाली लेगस्पिनर लामिछानेले विश्व चर्चित सबै लिग खेलिसकेका छन् । उनले आफूले खेलेका सबै लिगमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
यो पनि पढौं- होबार्टमा अनुबन्ध हुँदा सन्दीपले पाए मोटो रकम!
सन्दीपले २०१८ देखि २० सम्म दिल्ली क्यापिटल्समा जोडिएर आईपीएलमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । साथै, उनले नेपालका लागि २१ वानडे र १० टी-२० म्याच खेलिसकेका छन् ।
टी-२० क्रिकेटमा २० वर्षीय लामिछानेको उच्च प्रदर्शन चार ओभरमा ११ रन दिएर चार विकेट लिनु हो । उनले तेस्रो पटक बीबीएल खेलिरहेका हुन् ।
यो पनि पढौं- सन्दीप जोडिएसँगै यस्तो बन्यो होबार्ट हरिकेन्स (नामसहित)
स्कट बोल्याण्ड : ३१ वर्षीय स्कट बोल्याण्ड पनि होबार्टका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् । तीव्र गतिका बलर बोल्याण्डले राइजिङ पुणे सुपरजाइन्ट्सबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् । उनले अष्ट्रेलियाका लागि १४ वानडे र चार टी-२० पनि खेलिसकेका छन् ।
डी’अर्सी सर्ट : डी’अर्सी पनि होबार्टका प्रमुख सदस्य हुन् । उनी ओपनिङ ब्याट्सम्यानको भूमिकामा रमाउँछन् ।
चौका/छक्काको वर्षा गर्न माहिर डी’अर्सीले राजस्थान रोयल्सबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् । साथै, उनले अष्ट्रेलियाका लागि २० टी-२० र आठ एकदिवसीय म्याच पनि खेलेका छन् ।
बीबीएलमा डी’अर्सीले शतकसमेत बनाइसकेका छन् ।
पीटर ह्यासकम्ब : गत सिजनमा मेलबर्न स्टार्सबाट बीबीएल खेलेका पीटर यो सिजनमा पनि होबार्टमा जोडिएका छन् । उनी अनुभवी विकेटकीपर/ब्याट्सम्यान हुन् ।
पीटरले राइजिङपुणे सुपरजाइन्ट्सबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् । २९ वर्षीय ह्यान्सकम्बले अष्ट्रेलियाका लागि २२ वानडे, १६ टेष्ट र २ टी-२० म्याच खेलेका छन् ।
यो पनि पढौं- यी ३ विदेशी खेलाडी, जाे आईपीएल २०२१ नखेल्न सक्छन्
किमोे पउल : यी २२ वर्षीय वेष्ट इण्डिजका अलारउन्डर खेलाडीले पहिलो पटक बीबीएल खेल्न लागेका हुन् । उनी पछिल्लो समय विभिन्न देशका लिगका प्रुमख रोजाईमा पर्दै आएका छन् ।
पउलले दिल्ली क्यापिटल्सबाट आईपीएलमा भाग लिइसकेका छन् । उनले वेष्ट इण्डिजका लागि १९ वानडे, १८ टी-२० र तीन टेष्ट खेलिसकेका छन् । किमो बलिङका साथै राम्रो ब्याटिङ गर्न पनि सक्षम छन् ।bajhangnews.बाट सभार